Dts Iyo Nestle Waxay Heshaa Xiriir Wada Shaqeyn Wanaagsan Sanado Badan. | Shandong Dingtaisheng Makiinado Technology Co., Ltd.
Dts Iyo Nestle Joogtee Xiriir Wada Shaqeyn Wanaagsan Sanado Badan.
Sannadkii 2008, dts waxay siisay biyo-nadiifiyaha ugu horreeya ee buuxa ee nestle qingdao warshad ku taal Shiinaha soosaarka caano uumaysan oo qasacadaysan. Waxay si guul leh u bedeshay isla nooc ka mid ah qalabka lagu sameeyay Jarmalka. Sanadkii 2011 dts waxay siisay 12 nooc oo ah sterilizer roogayaasha uumiga ah ee dts-18-6 jinan yinlu (awooda 600cpm) ee soosaarka isku dhafka isku dhafan.
Sanadkii 2012, dts waxay siisay 10 nooc oo ah dts-16-6 biyo nadiif ah oo lagu nadiifiyo hubei yinlu (awooda 1000cpm) soosaarka ugu weyn ee kafee qasacadaysan (nescafe) ee wadajirka ah ee iskudarsan.
Dhamaadka sanadka 2012, dts waxay siisay 6 nooc oo ah nooca jeermiska uumiga ah ee dts-13-4 ee loo yaqaan 'xiamen yinlu' (awooda 600cpm) ee wax soo saarka ugu weyn ee nescafe qasacadaysan iyo caanaha looska.
Sannadkii 2013, dts waxay heshiis wada jir ah oo cilmi baaris ah la saxiixatay nestle beijing r & d si loo soo saaro badeecad cusub oo qasacadaysan (congee deg deg ah baaquli) muddo hal sano ah.
Sanadkii 2014, dts waxay siisay xirmo nadiif ah oo si otomaatig ah u shaqeeya xiamen yinlu (awooda 1200cpm) soosaarka ugu weyn ee nescafe qasacadaysan iyo caanaha looska. Nidaamka waxaa ka mid ahaa 4 jeer oo lagu buufiyo biyaha lagu buufiyo dts-18-6, makiinado si otomaatig ah u raritaan iyo dejin.
Sannadkii 2015, dts waxay bixisay 10 nooc oo biyo-nadiifiye ah oo dts-14-4 ah oo lagu buufiyo xiamen yinlu (awoodda 1000cpm) ee soosaarka shaaha geedaha.
Sanadkii 2016 dts waxay siisay 6 nooc oo ah sterilizer roogayaasha wareega ee uumi-jinni yinlu (awooda 600cpm) ee soosaarka isku dhafka isku dhafan.
Sanadka 2019 waxaa laga yaabaa in dts ay lashaqeysay warshadda turkey gonenli nestle oem si guul leh oo horeyba loogu soo saaray wax soo saar.
Sanadkii 2019 september dts waxay si wada jir ah ula shaqeeyeen sri lanka ceylon cabitaanka nestle oem warshad.
Sanadkii 2019 december dts waxay si wada jir ah ula shaqeeyeen warshada malaysia nestle nihong.